Uru nke argan mmanụ - Afrikhepri Fondation
Uru nke argan oil
UEjiri ụmụ nwanyị Berber mee ọtụtụ narị afọ iji weghachite anụ ahụ ha, mee ka ntutu ha dị ike ma chebe onwe ha site na anyanwụ na ifufe, mmanụ argan ji nwayọ na-akpụpụta ebe n'etiti ngwaahịa ndị mara mma nke ọdịda anyanwụ.
Wezuga ọgaranya na omega-6 abụba bara uru bara uru, vitamin E na polyphenols, mmanụ argan jupụtara na mmiri dị ukwuu, antioxidant na regenerative properties. Nnyocha ndị emere na Morocco na Europe gosipụtara na ọ na-eme ihe megide akọrọ na ịka nká nke anụ ahụ (mgbochi ndọlị) site na iweghachi ihe nkiri hydrolipidic ma na-amụba ihe oriri na-edozi ahụ nke sel.
Na ọgwụ Moroccan pharmacopoeia, a na-eji mmanụ argan eme ihe maka nlekọta ahụ iji gbochie mmetụta nke afọ na ihu igwe yana ịgwọ mgbakasị anụ ahụ dịka acne, eczema, chapped skin ụmụ nwanyị dị ime, ọkụ, ntachu, psoriasis na chickenpox. Ndị na-eme egwuregwu na-ejikwa ya iji belata ihe mgbu ahụ.
A na-ekwukwa na schottenol nke dị na argan nwere ọgwụ ndị na-eme ka ọ ghara ịdị. Na ụdị nri ya, ọ ga-ebelata cholesterol ọjọọ na ọbara mgbali elu.
N'ihi na a dị nro na hydrated akpụkpọ
Enwere ike iji mmanu akwukwo nri argan na ịhịa aka ọkụ na ihu dịka na ntinye aka na mpaghara n'akụkụ akuku ahụ. Ọ na-ehicha, na-eme ka ahụ dịghachi ndụ, na-eme ka anụ ahụ dị nro ma chebe ya pụọ ​​na akọrọ. Omume ya na-ebelata chapping na cracking kpatara oyi oyi, ikuku ma ọ bụ nnu ma na-enyere aka igbochi ndọlị. Mmanụ Argan na-asachapụ akpụkpọ anụ nwere anụ ahụ ma mee ka ọ na-enwu gbaa ma na-enwu gbaa. Ike ya na-arụ ọrụ dị ebube ma ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ agbanwe.
Tinye argan mmanụ na ihu na olu na anụ ejikere nke ọma; jiri nwayọ ịhịa aka na mmegharị okirikiri iji mee ka ọ banye; ka guzo 15 nkeji, wee wepụ ngafe mmanụ na a owu obi ụtọ tinye ke oroma okooko osisi ma ọ bụ bilie mmiri. Ọgwụgwọ ahụ na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọcha ma mee ka ọ dị nro.
Mmanụ Argan na-ebelata ihe mgbu nkwonkwo ma bụrụ ihe ama ama maka ịhịa aka n'ahụ. A na-eji ya dị ka mmanụ ịhịa aka ndị ọzọ niile ma nwee ike isi. Naanị tinye mmanụ ole na ole nke mmanụ dị mkpa ị họọrọ. N'otu oge ahụ, a na-ewetara ya ihe ndị ọzọ.
Na-eme ka ntutu dị ike
Mmanụ Argan na-eme ka isi dị ike, na-eweta ntutu na ntutu mgbe ha na-eweghachi ịdị nro ha na nke silky. A na-atụ aro ka e jiri ya mee ihe ịlụ ọgụ dandruff ma ọ bụ ntutu isi.
Iji weghachite ike na ntutu isi na-adịghị ike, tinye argan mmanụ site na mgbọrọgwụ ruo n'ọnụ; jiri nwayọọ hichaa ntutu iji kesaa ngwaahịa ahụ nke ọma; kechie ntutu na akwa nhicha ọkụ ma hapụ ka ọ dị ihe dị ka nkeji iri abụọ; saa ncha ntutu gị na mbụ ma sachaa. Enwere ike belata oge ezumike site na kpo oku ntutu dị na akwa nhicha ahụ na draya.
Iji chekwaa ntutu site na mmiri mmiri nke anwụ ma ọ bụ mmiri mmiri na chlorine, jiri ya mee mmanụ site na itinye ọkụkụ ọkụ ma ọ bụ tinye obere mmanụ argan na ntutu isi gị tupu ịkpụ.
Na-ewusi obere aka
Dị ka akpụkpọ, mbọ na-emebi, na-akpọ nkụ ma gbajie oyi, mmiri, nchacha, wdg. Mmanụ Argan nwere ike inye aka zụọ ma wusi ha ike.
Otu ugboro n'izu, gbanye ntu a kpochara na nke na-adịghị ọcha maka ihe dị ka minit 20 na ngwakọta nke akụkụ hà nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon na mmanụ argan, wee jiri ncha dị nro saa aka ahụ. Ọ bụrụ na mbọ ahụ dị egwu, megharịa ọrụ ahụ kwa ụbọchị. Enwere ike iji nkwadebe ọzọ; wunye ya na karama dị ọcha, ebe kpọrọ nkụ, ebe ọ ga-anọru otu izu. Maka ọgwụgwọ miri emi na-ewusi ike, hapụ ngwakọta ahụ ka ọ dị jụụ na mmiri ọkụ abụọ.
Iji mee ka ntu ndị ahụ dị ọcha, anyị gafere otu owu e tinyere na tụlee ole na ole nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon na oroma okooko mmiri.
AKWKWỌ AKW BKWỌ AKW BKWỌ AKW NaturalKWỌ AH & AKW 100KWỌ XNUMX% Dị Ọcha, Eke & Nzuzo Enwe | Glass pipette na mgbapụta, ...
Zụta € 11,98
Mmanụ Argan ọmụmụ si Morocco (n ° 228) - 500ml - 100% dị ọcha na eke, vegan, hexane n'efu ...
Zụta € 25,99
La Tourangelle - 100% organic na-amaghị nwoke Argan mmanụ - Ezigbo maka isi nri na ihe ịchọ mma - 250ml
Zụta € 13,95
Imeri ngwaahịa 11/20 * Organic Argan Oil Vegan Cold Enwe Mmetụta - Violet Glass Bottle 100 ml ...
Zụta € 17,99
Organic Argan Oil sitere na Morocco 100% Ọcha - Certified organic oyi enwe maka ihu na akpụkpọ ...
Zụta € 13,99
100% Mmanụ Ala Organic Dị Ọcha site na Nzuzo Nzuzo Isi na Isi - Ihe mbụ sitere na ...
Organic Argan Oil site na Ogige Fatima - Akwụkwọ 100% Organic nke Ecocert kwadoro - maka Ihu, Ntutu, ...
Zụta € 9,99
Ezigbo argan mmanụ - 100% a kwadoro organic. 100 ml. Maka ntutu Isi Isi
Omumu Mmanụ Almọnd Na-atọ (tọ (n ° 215) - 1 liter - 100% eke, vegan, non-GMO - odorless, ...
2 ọhụrụ site na .14,99 XNUMX
Oge emelitere ikpeazụ na February 26, 2021 6:58